Qaybaha warshadaha Jumlada ee Baabuurta Soo saaraha iyo Iibiyaha | Saxnimada QY
Qaybaha shaabadaynta ayaa si weyn loogu isticmaalaa baabuurta. Habka shaabadaynta birta waxay ku habboon tahay baahida warshadaha qaybaha gawaarida ee noocyada kala duwan iyo wax soo saarka ballaaran. Biraha shaambada qabowgu waxay u badan yihiin taarikada birta iyo birta, kuwaas oo xisaabiya 72.6% isticmaalka birta guud ee baabuurka. Alaabta qabowga lagu dhejiyo waxay saameeyaan tayada, qiimaha, wax soo saarka iyo abaabulka wax soo saarka, markaa waa hawl muhiim ah in si macquul ah loo beddelo alaabta baabuurta lagu dhejiyo.
Mabda'a xulashada walxaha ee qaybaha shaambada baabuurta
Markaad dooranayso alaabta qaybaha baabuurta, marka hore dooro qalabka birta ah ee leh sifooyin farsamo oo kala duwan iyadoo loo eegayo nooca shaabada baabuurta iyo isticmaalka sifooyinka. Guud ahaan, mabaadi'da soo socota waa in la raaco marka la dooranayo alaabta shaabadaynta baabuurta:
A Alaabta la doortay waa inay ahaadaan kuwo dhaqaale;B Alaabta la doortay waa inay lahaadaan hawlqabad ka wanaagsan;C Alaabta la doortay waa inay marka hore buuxiyaan shuruudaha waxqabadka ee qaybaha baabuurta.
Xidhiidhka u dhexeeya agabka la doortay ee qaybaha shaambada baabuurta iyo waxqabadkooda u dhigma
Qayb kasta oo gaar ah oo ka mid ah qaybaha auto stamping waxay wataan culeysyo kala duwan, sidaas darteed shuruudaha alaabta ayaa sidoo kale aad u kala duwan.
1. Shuruudaha waxqabadka alaabta ee qaybaha baabuurta.
Inta badan qaybaha baabuurtu waxay qaataan habka samaynta duub, kaas oo leh shuruudo gaar ah oo ku saabsan qaabaynta walxaha, qallafsanaanta, caabbinta daxalka iyo alxanka. Guud ahaan, taariko bir ah oo aad u sarreeya iyo birta hadhuudhka aadka u fiican ee leh heerka xoogga 300-600MPa ayaa la isticmaalaa.
2. Shuruudaha waxqabadka walxaha ee qaybaha taksiyada baabuurta.
Qaybaha taksiyada baabuurta lama adkeeyo, habka samaynta caaryada ayaa la qaatay, waxaana loo baahan yahay walxaha si ay u yeeshaan qaab-dhismeed, adkeynta xiisadda, xoojinta, caabbinta ilkaha, caabbinta daxalka iyo weldability. Naqshadaynta badeecada, xaashiyaha birta qabow-duuban ee kaarboon-yar, xaashiyo bir ah oo qabow-duuban oo ultra-hooseeya, xaashiyo bir ah oo laba-waji ah oo qabow-duuban oo leh sifooyin adag oo sarreeya, xaashi bir-qabow-qabow leh oo leh xoog sare, qabow dhalaal sare leh. bir duuban, oo la dubay xaashi bir ah oo qabow-duuban, bir kaarboon ah oo aadka u hooseeysa, birta qabowga duuban ee xoogga badan, fosfooraska-xoogga sare ee go'yaal qabow-duuban, iyo noocyo kale oo bir ah sida dahaarka leh. go'yaal bir ah, go'yaal tol-welded bir ah iyo go'yaal bir TRIP ah.
3. Shuruudaha waxqabadka alaabta ee qaybaha jir ee baabuurta.
Xirmooyinka, taarikada qolalka iyo qaybo muhiim ah oo qaadis ah ayaa inta badan lagu sameeyay shaambada caaryada, kuwaas oo u baahan qalab leh xoog sare iyo caag ka wanaagsan, iyo sidoo kale adkeysiga daalka, awoodda nuugista tamarta isku dhaca, iyo alxanka. Guud ahaan, taarikada birta ah ee xoogga badan, taarikada birta ah ee aadka u fiican (heerka xoogga 300-610MPa) iyo taarikada aadka u sarreeya (heerka xoogga 610-1000MPa) oo leh qaab-dhismeed ka wanaagsan ayaa la doortay.
Hore: Qalabka saxda ah
Xiga: Geedi socodka jilitaanka dhinta
Qaybaha Shaabada Gawaarida
Shaabadeynta Qaybaha Gawaarida